Halka Dalxiisayaashu ay Bixiyaan Qiimaha ugu sarreeya ee Maalmaha Qorraxdu
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalxiiska » Halka Dalxiisayaashu ay Bixiyaan Qiimaha ugu sarreeya ee Maalmaha Qorraxdu
Sawirka waxaa leh Jill Wellington oo ka socota Pixabay
Summer waa ku dhawaad ​​halkan, iyo socotada ayaa inta badan raadinaya meelaha ay ku raaxaystaan ​​diirimaadka qorraxda iyagoo isla markaa helaya lacagta ugu badan ee lacagtooda.
Cilmi-baadhis cusub oo ay samaysay ParkSleepFly ayaa lagu falanqeeyay inta saacadood ee qoraxda ee meelaha fasaxyada kala duwan ee adduunka oo dhan ay helaan maalin kasta iyada oo ay weheliso celceliska kharashka joogitaanka goob kasta si loo muujiyo waddamada ugu qaalisan ee loo tago qorraxda ugu cadceeda.
10ka goobood ee ugu qaalisan qorraxdu
Rank Goob Celceliska Saacadaha Qorraxda ee Sannadlaha ah Celceliska Saacadaha Qorraxda ee Maalinlaha ah Celceliska Qiimaha Qolka Hudheelka ee Laba Jibaaran Hal Habeen Qiimaha saacaddii qoraxda
7 Sevilla, Spain 3,433 9.4 $ 274 $ 29.12
8 Ibiza, Spain 3,545 9.7 $ 274 $ 28.20
Meesha qorraxda ugu qaalisan ee adduunka oo dhan waa Lahaina, Maui, Hawaii oo ay ku kacayso saacaddii qorraxdu $95.62. Goobta dalxiiska ee dalxiisku waxay buundada ku xirtaa goobaha loo dalxiis tago ee caanka ah ee jasiiradda waana xarunta taariikhiga ah iyo dhaqanka ee Maui. Lahaina waxay aragtaa qiyaastii 3,385 saacadood oo qorrax ah sannadkii, taasoo la mid ah qiyaastii 9.3 saacadood oo qorrax ah maalintii.
Meesha labaad ee ugu qaalisan qorraxdu waa Miami, Florida iyadoo qiimaheedu yahay saacaddii qorraxdu $42.05. Mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee fasaxa xeebta, Miami waa goob dalxiis oo caan ah oo ka mid ah dadka safarka ah ee ka yimid Maraykanka iyo adduunka oo dhan. Magaaladu waxay heshaa qiyaastii 3,213 saacadood oo qorrax ah sannadkii, sidaas darteed waxay helaysaa celcelis ahaan 8.8 saacadood oo qorrax ah maalintii.
Meesha saddexaad ee ugu qaalisan qorraxdu waa goobta xeebta ah ee Belle Mare, oo ku taal jannada kulaylaha ee Mauritius oo qiimaheedu yahay saacaddii qorraxdu $ 40.71. Goobta safarka qorraxdu ku badan tahay waxay heshaa celcelis ahaan 2,565 saacadood oo qorrax ah sannadkii, sidaas darteed waxay helaysaa qiyaastii 7 saacadood oo qorrax ah maalintii.
Si aad u aragto inta ka hartay liiska meelaynta qoraxda guji halkan.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan Safarka Xagaaga
Caadi ahaan Ku soo Laabashada Garoomada Caalamiga ah ee Jamaica
Cilmi-baaris cusub ayaa muujisay hoos u dhaca ogaanshaha kansarka sababtoo ah ...
Jardiance waxay caawisaa dadka waaweyn ka dib wadno-gabka degdega ah
Latvia waxay mamnuucday bandhigga dadweynaha ee 'Z' iyo ...
Tijaabo Caafimaad oo Cusub oo loogu talagalay Gastrostomy-ka Carruurta
GVB waxa uu isu diyaarinayaa sannad-guuradii 55-aad ee Japan...